7-Dhisme Casri Casri Jiinis Casri Ah Oo Dhismaya | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 Kocaeli7-Dhisme Casri Casri Jiinis Casri Ah Oo Dhameystiran
16 / 02 / 2020 41 Kocaeli, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Gobolka Marmara, TURKEY
Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli Balamir Gündoğdu wuxuu baaritaano ka sameeyay qeybta 7-aad ee gawaarida la dhigto, kuwaa oo dhisme ka socdo xarunta degmada Gebze.
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay dhiseysaa gaari 7-dabaq ah oo ku yaal mid ka mid ah waddooyinka ugu mashquulka badan Gebze. Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose Balamir Gündoğdu wuxuu baaritaano ku sameeyay baarkinka gawaarida casriga ah, halkaas oo dhul gariirku ka bilawday kaas oo uu ku hormarin doono Duqa Magaalada Kocaeli ee Magaalada Tahir Büyükakın bisha Maarso.
Dawlada Hoose ee Magaalada, oo danaynaysa dhibaatooyinka taraafikada meel kasta oo Kocaeli ah isla markaana fulisa daraasadaha lagama maarmaanka ah, waxay sii wadaysaa inay xalliso dhibaatooyinkaas iyada oo la dhigto gobollada ay dhibaatooyinku ka jiraan. Xaaladda guud, Balamir Gündoğdu, Xoghayaha Guud ee Magaalada Magaalaweynta, wuxuu baarey baarkinka 7-dabaq, oo wali ka socda xarunta degmada Gebze. Gündoğdu waxaa wehelinayay kuxigeenka xoghayaha guud Mustafa Altay, madaxa waaxda xakamaynta dhismaha Serkan Ihlamur iyo wakiilo shirkad intii ay socday baaritaanka. Xoghayaha guud Balamir Gündoğdu ayaa lagu wargaliyay in dhismaha baarkinku gaadhiga la soo gabagabeeyey isla markaana dhul-beereedka la bilaabay.
HADDII AAD U DHACAY
Meesha baabuurta la dhigto, oo ka socota Gebze Kızılay Avenue, waxay lahaan doontaa guud ahaan aag isticmaalka 14 mitir murabac. Iyada oo wadooyinka qardhaaska lagu samaynayo wadooyinka gudaha ee baarkinka, halkaas oo shaqadu ku sii soconayso dabaqyada oo dhan, taabashooyinka dhammaystirka ah ayaa lagu dhammeeyey hawlaha gudaha.
Markii la ogaadey in baarkinka gawaaridu uu baahi weyn u qabo degmada Gebze, Xoghayaha Guud ee Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli Balamir Gündoğdu; Degmadeena Gebze waa mid ka mid ah Degmooyinka ugu dadka badan Kocaeli. Waxaan dhisnay garoon gawaarida 7-dabaq ah oo lagu xalliyo taraafikada iyo dhibaatada la xiriira baarkinka ee degmaadeena. Baarkinkayaga gawaarida, oo loo dhisay 3 dabaq oo dabaq ah, dabaqa dhulka iyo 3 dabaq oo caadi ah, waxay lahaan doonaan 497 gaari. ”
Isagoo ogsoon in meesha baarkinku ku qalabaysan tahay tikniyoolajiyad casri ah, Xoghayaha Guud Gündoğdu; Meesha baabuurta la dhigto ee aan dhisnay ayaa leh qalab tiknolojiyad casri ah. Thanks to dareemayaasha baarkinada gawaarida, darawaladayada waxay awood u yeelan doonaan inay arkaan dhulka dabaqa ah ee ka banaan meesha laga soo galo gaariga. Meeraheena baarkinka waxaa lagu xakameyn doonaa kamarad 7/24 iyo nidaamka amniga. Meesha baarkinka la dhigto, waxaad kula kici doontaa sagxadaha adoo wata laba wiish oo leh 630 iyo 800 kg. Intaa waxaa u dheer, baarkinka waxaa lagu qalabeyn doonaa jiil cusub oo horseed nalal, nidaamka qalabka dabka sheega, nidaamka qalabka digniinta dabka, nadaamka ilaalinta hillaaca (hillaaca dabka) iyo nidaamka matoorrada loo adeegsado jaridda korantada. Shaqada dhamaan sagxadaha ayaa la soo gabagabeeyey ilaa xad. Kooxaheennu waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan muuqaalka dhirta. Waxaan rajeyneynaa, in bisha Maarso, madaxweynahayaga Tahir Büyükakın uu horumarin doono baarkinkeena.
Dhismaha Wadada Tareenka ee Crimean
Baarkinka casriga ah ee Kestel District of Bursa
Saldhigga tareenka ee Gebze Fatih 150 Car Park ayaa la dhisayaa
Shirkadda Dhismaha Waddada Shiinaha, Canoe for Construction Rail Construction Nigeria 1.8…
Turkmenistan Afgaanistaan ​​Tajikistan Railway Dhismaha 3 Madax-weyne ın